उत्कृष्ट खेलसँगै नेपाल बाहिरियो, Hamro Bhaktapur "A Complete information about Bhaktapur and its People"
उत्कृष्ट खेलसँगै नेपाल बाहिरियो
सब्स्िटच्युट भरत खवासले लोभलाग्दो गोल गरेपछि नेपालले विश्वकप-२०१४ अन्तर्गत एसियाली छनोटको दोस्रो चरणमा जोर्डनसँग १-१ को बराबरी बिहीबार खेलेको छ । अम्मानमा शनिबार भएको पहिलो लेगमा भने जोर्डनले ९-० को नतिजा निकालेको थियो । त्यसैले समग्रमा १०-१ को जित हात पार्दै जोर्डन एसियाली छनोटको तेस्रो चरण -समूह चरण) प्रवेश गर्‍यो । नेपालको छनोट यात्रा भने लगातार दोस्रोपल्ट दोस्रो चरणमै टुंगियो अर्थात् तीन वर्षपछि ब्राजिलमा हुने विश्वकप खेल्ने नेपालको सम्भावना समाप्त भयो । नेपालले खेलेका विश्वकप छनोटका २८ मध्ये बराबरीमा टुंग्याएको यो तेस्रो खेल हो । २६ वर्षअघि छनोट खेल्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म चार खेलमात्र जितेको छ । बाँकी २१ खेलमा नेपालले प्रतिद्वन्द्वीलाई नतिजा सुम्पेको थियो । फिफा वरीयतामा ४५ स्थानमाथिको जोर्डनविरुद्ध भरतले खेल सकिन १० मिनेटअघि गरेको गोलको सहयोगमा नेपालले बराबरी नतिजा निकालेको थियो । भरतको गोलमा सन्तोष साहुखलले बनाएको मुभ आकर्षक रह्यो । जोर्डनी डिफेन्डर बानी यासिनले मैदानको मध्यभागमा फुस्काएको बल नियन्त्रण गर्दै सन्तोषले अघि बढाएर उत्कृष्ट पास दिएका थिए । पेनाल्टी क्षेत्रबाट भरतले बायाँ खुट्टाले प्रहार गरेको त्यही बल सुन्दर गोलमा परिणत भएको थियो । भरतले २१ औं वर्षमा टेकेकै दिन १० क्याप जित्दै नेपालका लागि तेस्रो गोल गरेका हुन् । विराज महर्जनलाई विस्थापित गर्दै उनी ६६ औं मिनेटमा मैदानमा प्रवेश गरेका थिए ।
'पहिलो हाफपछिको ब्रेकमा वार्म अप गर्दै ५-१० मिनेट मात्रै खेल्न पाए पनि गोल गर्छुंजस्तो लागेको थियो र त्यो कुरा साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ,' पुलिसमा फरवार्ड र राष्ट्रिय टिममा मिडफिल्डरको भूमिका निभाउँदै आएका भरतले भने, 'गोल पनि गरें । निकै खुसी लागेको छ ।' गोल फर्काएपछि नेपालले जोर्डनलाई निरन्तर दबाबमा राखे पनि थप गोल गर्न सकेन । वषर्ात्बीच नेपालले प्रभाव जमाएको खेलमा अग्रता भने जोर्डनले लिएको थियो । कप्तान मोहम्मद खलिलले प्रहार गरेको कर्नरमा पेनाल्टी क्षेत्रमा 'अनमार्क' रहेका मोहम्मद सइदले हेडद्वारा बललाई पोस्टको दिशा दिंदै ६३ औं मिनेटमा जोर्डनलाई अघि बढाएका थिए । नेपालको सुरुआत पनि राम्रो थियो । प्रदर्शनअनुसार फिनिसिङ भने राम्रो रहेन । गोलका राम्रा ६ अवसरमा नेपाली खेलाडी चुके । पटक-पटक राम्रो मुभ बनाएको नेपालले १० पि|m-किक र नौ पल्ट कर्नरकिक प्रहार गर्‍यो । जोर्डनले ८ पि|m-किक र ५ कर्नरकिक पाएको थियो । विश्वकप खेल्ने योजना बनाएको जोर्डन दशरथ रंगशालामा राम्रो मुभ बुन्न असफल रह्यो । अम्मानमा २-२ गोल गरेका खलिल, अहमद हायल र एक गोल गरेका अब्द अल्लाह दिब नेपालविरुद्ध जम्न सकेनन् । मुस्ताफा सुलेइमन बल लिएर एक्लै अघि बढेको स्थितिमा रोहित चन्दले सटीक ट्याकल गर्दै नेपालको संकट टारेका थिए । पहिलो रोजाइमा दुई परिवर्तन गरेको नेपाली टिमलाई रंगशालामा उपस्थित करिब २० हजार दर्शक ऊर्जा बनेका थिए । जगजित श्रेष्ठले उत्कृष्ट रूपमा उपलब्ध गराएको बल सन्तोषले १० यार्डनजिकबाट प्रहार गर्न ढिलाइ गर्दा यासिनले ३६ औं मिनेटमा क्लियर गरे । त्यही अवसरमा भोला सिलवालले कर्नर प्रहार गरे । त्यसमा रोहित चन्दले 'फि्लक' गरेको बललाई १० यार्डभित्रबाट 'अनमार्क' कप्तान सागर थापाले पोस्टको दिशा दिन सकेनन् । उनले हेड गरेको बल पोस्टमाथिबाट बाहिरियो । सन्तोषले ४४ औं मिनेटमा बनाएको मुभ उत्कृष्ट रह्यो । दुई डिफेन्डरलाई छक्याएर आफैंले सिर्जना गरेको अवसरमा उनले बल प्रहार गर्न फेरि ढिलाइ गर्दा डिफेन्सले क्लियर गरे । भोलाले २५ यार्डबाट प्रहार गरेको पि|m-किकमा अनिल गुरुङले हेड गरेको बल पोस्टमा लागेर बाहिरिँदा नेपाल ४७ औं मिनेटमै अग्रता लिन असफल रह्यो । ँसाफ च्याम्पियन बन्न सक्छौं’ 'सबैले मिहिनेत गरे । उत्कृष्ट खेल देखाए,' नेपालका प्रशिक्षक ग्राहम रोबर्ट्सले भने, 'भरतले गरेको गोल निकै उत्कृष्ट रह्यो । म गर्व अनुभव गरिरहेको छु । गएको साता निराश भएको थिएँ । प्रत्येक खेलमा यस्तै प्रदर्शन गर्ने हो भने हामी पक्कै पनि साफ च्याम्पियन हुनेछौं ।' अम्मानमा ९-० ले हारेपछि खेलाडीलाई के भनेका थियौ ? संवाददाताको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, 'उत्तर कोरियाविरुद्ध उत्कृष्ट खेल्न सक्छौं भने जोर्डनसँग किन सक्दैनौं ? देशका लागि खेल । नेपाली जनतालाई खेल देखाऊ भनेको थिएँ । उनीहरूले राम्रो खेल देखाए पनि । जोर्डन उत्कृष्ट टिम हो । तर उसलाई प्रदर्शनमा आज -बिहीबार) हामीले हरायौं ।' अब नेपालको लक्ष्य डिसेम्बरमा हुने साफ च्याम्पियनसिप जित्ने भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'गुडलक फर जोर्डन ।' घरमा गरेको राम्रो प्रदर्शनसँगै प्रशिक्षकको निर्देशनको पूर्ण पालना भएको नेपालका कप्तान सागर थापाले बताए । 'अम्मानमा खेल्न सकेका थिएनौं,' सागरले भने, 'काठमाडौंमा राम्रो खेलेजस्तो लागेको छ । उनीहरूलाई राम्रो खेल्ने मौका पनि दिएनौं । खेल जित्छौं जस्तो लागेको थियो । राम्रो टिम भएको हामीले प्रमाणित गर्‍यौं ।' प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १३ ०९:२३स्रोत: कान्तिपुर